भाइरल भिडियो : हिउँमा चढ्ने भालु र उसको बच्चाको वास्तविकता के हाे? – Chetananews.com
भाइरल भिडियो : हिउँमा चढ्ने भालु र उसको बच्चाको वास्तविकता के हाे?
२४ कार्तिक २०७५, शनिबार १२:११ 101 पटक हेरिएको
काठमाडाैं । सामाजिक सञ्जालमा हिजोआज एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ। भिडियोमा भालूको एउटा बच्चा पहाड चढ्न प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।
यो भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा एउटा प्रेरणा जगाउने विषयको रुपमा भाइरल बनाइएको छ। भिडियोमा एउटा बच्चा भालु आफ्नी आमासँग कसरी हिउँकाे पहाडमा चढ्ने प्रयास गर्छ देखाइएको छ। पहिलो पटक बच्चा भालुलाई आफ्नी आमासँग हिउँकाे भिरालोमा देखिन्छ। जब उसकी आमा विस्तारै विस्तारै अघि बढ्न थाल्छिन् त्यो बच्चा भालु पनि पछिपछि लाग्छ। पहाडमा जमेको हिउँमा बारम्बार लड्दा पनि भालूको त्यो बच्चा हार मान्दैन। र लगातार चढ्न प्रयास गरिरहन्छ।
बच्चा भालु लड्ने क्रममा एउटा यस्तो स्थिति पनि आउँछ कि अब बच्चा भालू मर्ने भयाे। तर ऊ कुनै तरहले चट्टानमा अड्किन सफल हुन्छ। र अन्ततः आफ्नी आमासँग पुग्नछ। सामाजिक सञ्जालमा मान्छेहरुले यो भिडियो फुटेजलाई खुब रुचाएका छन्। मान्छेहरुले यसलाई प्रेरणादायी भनिरहेका छन्।
भिडियो कसले खिच्यो?
जीव वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक दुनियाँमा काम गर्नेहरुले भिडियोलाई लिएर प्रश्न गरिरहेका छन्। भिडियोग्राफरको आलोचना गरिरहेका छन्। यो भिडियो रुसी फोटोग्राफर दिमित्री केद्रोवले ड्रोनको सहयोगले खिचेका हुन्। भालुलाई कुनै असर नपर्ने गरी आफूले भिडियो खिचेको दाबी गरेका छन्।